Mooshin weerar celis ah oo la diyaarinayo iyo shir ka socda Villa HARGEYSA - Caasimada Online
Home Warar Mooshin weerar celis ah oo la diyaarinayo iyo shir ka socda Villa...
Mooshin weerar celis ah oo la diyaarinayo iyo shir ka socda Villa HARGEYSA
Muqdisho (Caasimada Online) – Iyadoo Saacado ka hor guddoomiyaha baarlamaanka uu qabtay mooshin ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa hadda socda shir xasaasi ah oo lagu gudbinayo mooshin weerar celis ah.
Xarunta Villa Hargeysa ayaa waxaa ka socda shir deg deg ah ay leeyihiin xildhibanada taageersan madaxweynaha kuwaas oo la filayo inay gudbiyaan mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamanka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan.
Xildhibaanadan ayaa ah badankood ah wasiiro, wasiir ku xigeenno iyo wasiiro dowlayaal ka tirsan xukuumadda Kheyre.
Lama garanayo ilaa iyo xiligan tirada xildhibaanada mooshinka ka keenaya guddoomiye Mursal, waxaase arrintan ka shaqeynaya guddoomiye ku xigeenka koowaad iyo kan labaad ee baarlamanka Cabdi Weli Muudeey iyo Mahad Cawad.
Mooshinka ayaa la filayaa inuu aqbalo Muudeey. Sidoo kale, Muudeey iyo Cawad ayaa la filayaa inay goordhow qabtaan shir jaraa’id oo ku sheegi doonaan in mooshinka madaxweynaha iyo tallaabada Mursal ay yihiin sharci-darro.
Xiisadda siyaasadeed ayaa kacsan, iyadoo aan la ogeyn sida xaalka uu noqon doono.